Shan Waxyaabood oo laga diiwaangeliyey Ku Laabashada Ronaldo ee Tababarka Manchester United | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Shan Waxyaabood oo laga diiwaangeliyey Ku Laabashada Ronaldo ee Tababarka Manchester United
Shan Waxyaabood oo laga diiwaangeliyey Ku Laabashada Ronaldo ee Tababarka Manchester United
Cristiano Ronaldo ayaa maanta tababarkiisii u horreeyey maanta la qaatay ciyaartoyda Manchester United isagoo tegay xarunta Carrington, halkaas oo uu kusoo dhoweeyey Ole Gunnar Solskjaer oo xafiiskiisa ku qaabbilay ka hor intii aanu tababarku bilaabmin.
Ronaldo oo 36 jir ah, waxa uu tababarka United la qaatay markii u horreysay tan iyo markii uu ka tegay 2009, laakiin ay hadda kooxdu dib ugala soo saxeexatay Juventus, qalinkana uu ku duugay heshiis laba sannadood ah.
Weeraryahankan ruug-caddaaga ah oo laba gool oo kalsoonidiisa sare u qaaday ka dhaliyey kulankii toddobaadkii hore ee Republic of Ireland ee isreeb-reebka Koobka Adduunka, isla markaana uu ku jabiyey rikoodhka goolasha kulamada caalamiga ah, ayaa waxa uu la midoobayaa ciyaarrtoyda United.
Tababarkii maanta waxa uu waqti ka qaatay inuu la sheekaysto ciyaartoyda ay isku cusub yihiin ee Manchester United ee isku diyaarinaya kulanka Sabtida ee Newcastle United iyo tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Shan Arrimood ayaa laga diiwaangeliyey tababarkii Cristiano Ronaldo ee maanta, waxaanay kala ahaayeen:
1. Kubadda lugtiisa kusoo laabatay
Cristiano Ronaldo waxa uu shantii maalmood ee ugu dambeeyey ku xaraysnaa gurigiisa cusub ee magaalada Manchester oo uu karantiil kaga jiray kaddib markii uu Khamiistii soo gaadhay halkaas. Tababarka maanta waxa uu ahaa midkii u horreeyey ee uu kubbad ku laado shantii maalmood ee u dambeeyey.
Kabtanka xulka Portugal ayay Manchester United ku faraxday markii kaadhka digniinta ah la siiyey usbuucii hore xilligii uu u dabbaal-degayay goolashii uu dhaliyey, sababtuna waxay tahay inuu seegay ciyaartii caawa ee xulka dalkiisa isla markaana uu United u tegay waqti hore si uu iskugu diyaariyo kulanka Newcastle. Haddii aanu ganaaxaasi ku dhici lahayn, Ronaldo waxa uu lasii joogi lahaa xulka, waxaanu seegi lahaa ugu yaraan kulanka Newcastle, halka uu shaki geli lahaa ciyaarta Champions League ee usbuuca dambe.
2. Ardaygii oo noqday macallin
Cristiano Ronaldo lixdii sannadood ee hore ee uu joogay Manchester United, waxa gacanta ku hayay oo uu arday u ahaa Sir Alex Ferguson oo isagoo carruur ah kasoo iibsaday Sporting Lisbon sannadkii 2003.
Da’yarkii waqtigaas ee garabka weerarka ka ciyaari jiray, waa khabiir afka hore ah oo noqday ciyaartoy dhamaystiran, laakiin Ole Gunnar Solskjaer oo ay ardey wada ahaayeen xilligaas ayaa hadda u noqonaya tababare iyo macallin.
3. Wajiyadii hore ee is helay
Ronaldo ayaa la arkayay isaga oo garoonka tababarka dhexdiisa kula sheekaysanaya Mike Phelan, waxaana muuqaalkaasi uu taageereyaasha soo xasuusiyey xilligii hore ee Ronaldo uu yimid kooxda ee uu Phelan sidan oo kale u joogay naadiga.
Phelan waxa uu ahaa gacanta midig ee Sir Alex Ferguson sannado badan, waxaana waqtigaas isaguna kooxda joogay Ronaldo ka hor intii aanu tegin Real Madrid. Xusuusaha dib usoo noolaaday ayaa waxa ku jiray in Phelan iyo Ronaldo ay ahaayeen kuwii Old Trafford ugu dabbaal-degay guushii horyaalka Premier League ee 2008-09 ee Manchester United.
Ronaldo waxa kale oo ay garoonka tababarka ku kulmeen saaxiibkiisii hore ee Darren Fletcher ee ay iska garab ciyaari jireen oo hadda ah agaasimaha farsamada Manchester United.
4. Saaxiibbada cusub
Kaddib kulankii Ole Gunnar Solskjaer, Phelan iyo Fletcher, Cristiano Ronaldo waxa uu sheeko iyo qosol ba la wadaagay Fred oo noqonaya mid ka mid ah saaxiibbadiisa cusub. Diogo Dalott oo ay xulka qaranka Portugal u wada ciyaaraan ayaa sheekada Fred iyo Ronaldo wehelinayay, waxaanay saddexdaba la sawiray iyagoo qosol isku dhoola-caddaynaya xilli uu socday tababarku.
5. Go’aanka muhiimka ah
Cristiano Ronaldo miyuu kusoo bilaaban doonaa ciyaarta Newcastle United ee Sabtida?
Taageere kasta oo Manchester United iyo Premier League ah waxa uu is-weydiinayaa su’aashan, laakiin Ole Gunnar Solksjaer oo kaliya ayaa og jawaabta.
Laacibka reer Portugal ayaa isaguna doonaya inuu helo dareenka taageereyaasha Old Trafford, waxaanay u samaynaysaa farxad iyo deggenaan marka uu arko 80,000 taageereyaal ah oo soo dhoweyntiisa u istaagaya.
Solskjaer ayaa laga sugayaa go’aanka ah haddii uu Ronaldo kusoo bilaabanayo ciyaartan, laakiin waxa uu isaguna ku go’aan qaadan doonaa sida uu Ronaldo tababarka ula qaato ciyaartoyda kale maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha.
Previous articleCristiano Ronaldo oo ku biiray Tababarka kooxda Manchester United
Next articleDeg Deg Farmaajo oo Xil u Magacaabay Fahad Yaasiin 07/09/2021